Ukuhlonipha abangasekho | eNanda Online
by eNanda.co.za in Amasiko & Amagugu
Indlela abantu abangamaZulu abakhumbula ngayo, abahlonipha ngayo nabaxhumana ngayo nabantu abangasekho
Abantu abangamaZulu bakholelwa ekutheni umuntu ohlobene naye ongasekho emhlabeni uyidlozi futhi uhlonyishwa kakhulu. Uma umuntu eshona, kukholelwa ekutheni uyahamba uya kubantu base mndenini wakhe asebashona. Kukholelwa ekutheni bazoba ndawonye babheke laba abasaphila emhlabeni. Abanye abantu bakholelwa ukuthi amadlozi angumxhumanisi phakhathi kwabuntu abaphilayo noNkulunkulu, nokuthi basebenzisana noNkulunkulu. Abantu abangamaZulu bawahlonipha kakhulu amadlozi futhi bakholwa ukuthi fanele zenziwe izinto ezifunwa amadlozi ukuze izinto zihambe kahle empilweni njengoba wona esondelene noNkulunkulu. Izangoma ziyabasiza abantu ukuthi bazi ukuthi amadlozi abo afunani kubona, njengokuthi kudingeka usiko elithile, abantu abangasekho bayafika nangephupho. Abantu abadala bayakwazi ukuhlaziya amaphupho, bayakwazi ukusho ukuthi amaphupho asho ukuthini.
Uma uphupha umuntu ongasekho owumndeni noma ubekade ewumngani nawe, ekutshela ukuthi ulambile noma uyagodola, kudingeka enzelwe umsebenzi. Uma lowo muntu omuphuphile ebekade ewu mngani, uyahamba uyotshela umndeni wakhe bese kuba yibona abamenzela umsebenzi. Uma umuntu ongasekho efika kuwe ngephupho, efika esesimeni esihle, emamatheka futhi ehleka nawe; kukholelwa ukuthi uzoletha izinhlanhla. Uma ubanamaphupho amaningi ngabantu asebadlula emhlabeni basemndenini noma uba namaphupho ongawaqondi, ungaya ukuyobona isangoma bese sona siyakutshela ukuthi kudingekani.
Isikhathi esiningi, abantu abangamaZulu bavakashela emathuneni uma kukhona isiko elithile abazolenza kodwa kuyenzeka ukuthi bavakashe kungekho usiko elizokenziwa; njengo kuyolungisa ethuneni, ususe udoti notshani. Uma kuzombulwa itshe, kubalulekile kuthi kuyiwe emathuneni. Mekuzombulwa itshe, kwenziwa kanye kanye nesiko elaziwa ngokuthi ukubuyisa umuntu ongasekho ekhaya. Lolusiko lenziwa emvakonyaka noma emibili umuntu eshonile. Bekuzokwenziwa lolusiko, umndeni uqala uhambe uye ethuneni lalowo ongasekho befike bakhulume naye, bamutshele ngalokho abazokwenza, bangakhuluma nangezinkinga ababhekene nazo. Ngayizolo kosuku lokwembula itshe, kuhlatshwa inkomo, kuthunyiswe impepho bese kukhulunywa namadlozi.
Ukuthunyiswa kwempepho kusetshenziselwa ukuxhumana namadlozi, kwesinye isikhathi impepho uyayithunisela ukeqeda ikhanda elikuphethe noma uma uphupha kabi, ukuxosha imimoya emibi kodwa isikhathi esiningi impepho ithuniselwa ukuxhumana namadlozi. Kwesinye isikhathi impepho ithuniselwa ukukhumbula nabangasekho futhi ijwayele ukuphelezelwa IsiZulu (utshwala besiZulu). Isiko / umsebenzi awuphelele ngaphandle kwesiZulu futhi impepho ibalilekile kwamasiko okuxhumana nabaphansi.
Isilwane sihlatshelwa imicimbi eyahluka hlukene futhi sihlatshelwa izinto ezahlukene, inkomo, imbuzi nenkukhu izona kuphela izilwane ezihlatshelwa amadlozi. Olunye usiko engilaziyo iladi, elenzelwa ukukhumbula abangasekho. Ngikhumbula ngesikhathi iladi lenziwa ekhaya; kwaqala ngesikhathi umngani kamama (usadlala emhlabeni) owayesondelene kakhulu naye emuphupha. Wathi, ngesikhathi umama efika kuyena ngephupho, wamutshela ukuthi akazungena endlini ngoba akatshelwanga ukuthi angene. Umngani kamama waqala watshela udadewakhe oyisangoma bese washo ukuthi kumele senze iladi. Ngesikhathi silungiselela iladi, saqala saya ethuneni likamama, bese ntambama sathunisa impepho sakhuluma naye kanye nabanye abuntu base mndenini asebathula, sacela uxolo bese sahlaba izinkukhu. Bese salungisa nokudla abekade ekuthanda, izithelo; amadumbe nobhatata nokunye ukudla kwesintu kanye nesiZulu. Konke lokhu sakwenza ngoLwesihlanu ntambama, bese ngoMgqibelo, omakhelwa beza emcimbini, konke ukudla kwadliwa ngoMgqibelo. Ngaphambi kokuthunisa impepho, sathandaza kuNkulunkulu, sicela ukuthi yonke into ihambe kahle, sikwenza lokhu kanye nesangoma.
Amasiko esintu anoshintsho, kunoshintsho ezindleleni zokwenza amasiko, kuyahluka ngomndeni nomndeni kodwa kuyanangokuthi uqhamuka kwesiphi isigodi. Kodwa kukhona izinto ngamasiko ezingashintshi.
Ngingu Ayanda Siphesihle Ngcobo, ngineminyaka engu 19, kodwa ngizohlanganisa iminyaka engu 20 ngenyanga ka Lwezi yakuwo lonyaka. Ngakhulela eNanda Newtown A futhi ngisahlala khona namanje. Ngingo wesiko lama Zulu, ilimu lakithi isiZulu ngakho-khe nginalo ulwazi ngamasiko akwa Zulu. Amasiko ahamba, ahambe abenoshintsho emva kwesikhathi, akushintshi yonkinto kodwa izindlela ezithile zokwenza izinto ziba nomehluko othile. Lokho kwenza ukuthi kube lukhuni ukuthi umuntu osemusha njengami azazi zonke izindlela zokwenza usiko. Ngike ngibuke uma amasiko enziwa bese ngiphinde ngibuze ugogo nomkhulu ngezinto eziningi eziphatheleni namasiko kodwa nabo babuye bengavumelani ngezindlela ezithile zokwenza amasiko.
148 Responses to “Ukuhlonipha abangasekho”